Enclaves voajanahary 6 hitsidika amin'ny Novambra | Bezzia
Enclaves voajanahary 6 hitsidika amin'ny volana Novambra
Maria vazquez | 29/09/2021 10:00 | Ocio, Tsangatsangana
Na oviana na oviana ny taona dia tsara ny mitsidika ireo mpiorina voajanahary izay arosontsika anio, fa ireo kosa mahazo majika manokana izy ireo mandritra ny fararano. Na amin'ny loko azon'ny ravina hazo na amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny rano ony, ny volana oktobra sy novambra dia aseho ho volana tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana na fitsangatsanganana nankany amin'ireo toerana ireo. Fa inona avy ireo?
1 Castañar avy any El Tiemblo
2 Valan-javaboary Lobos River Canyon
3 Valan-javaboary voajanahary amin'ny faritra volkanika ao La Garrotxa
4 Làlan'ny hazo oliva zato taonan'ny Martos
6 Lohasaha Ambroz
Castañar avy any El Tiemblo
Ny firafitry ny El Castañar de el Tiemblo ity toerana ity dia ahafahanao mijery sy mahalala iray amin'ireo ala tsara tarehy sy tsy manam-paharoa avy amin'ny faritra Valle del Alberche sy Tierra de Pinares ao Castilla y León. 90 kilometatra monja miala an'i Madrid no misy azy, dia lasa safidy hafa amin'ny fitsangatsanganana izy io. Hatramin'izay taona vitsivitsy izay dia nisy ny fameperana mba hialana amin'ny mavesatra loatra amin'ny volana Oktobra sy Novambra.
Raha tsy amin'ny vanim-potoana, ny lokon'ity enclave voajanahary ity dia mety tsy dia mahavariana loatra fa mbola toerana misintona amin'ny tanàna izy io. Afaka mahita zotra samihafa manodidina ity toerana ity ianao mba hankafizanao irery na miaraka amin'ny fianakavianao, na izany aza, ny ala-trondro any El Tiemblo no be mpitia indrindra. Iray io Làlana boribory 4,4 kilometatra izay manomboka ao amin'ny faritra fialamboly El Regajo ary mankamin'ny hazo kastany «El abuelo», hazo chestnut manan-jato taonina, 500 taona mahery. Saika fisaka ilay lalana ary sokajiana ho mora, ka mahatonga azy io ho mandeha tsara miaraka amin'ny ankizy na olona tsy afa-mihetsika.
Valan-javaboary Lobos River Canyon
Ny valan-javaboahary Cañón del Río Lobos dia faritra voajanahary voaaro ao Castilla y León. Manodidina ny 10.000 hekitara ny elanelana misy eo anelanelan'ny faritanin'i Burgos sy Soria ary misongadina noho ireo sary miavaka vita sokitra voasarin'ny rano amin'ny renirano Lobos, ny hermitage Templar tsara an'i San Bartolomé, ary ny zanatany griffon manan-danja. voromahery.
Ao amin'ny valan-javaboary voajanahary dia misy lalan-kely voamarika tsara izay ahafahanao mahafantatra ireo endrika sy tontolo iainana isan-karazany. Ny tena azo idirana sy mahazatra dia ny mandeha an-tongotra mankany amin'ny hermitage San Bartolomé. Avy eo amin'ny fiantsonan'ny fiara Valdecea dia manodidina ny 1000 metatra mankany amin'ny esplanade ny hermitage, ary raha hanao io lalana io ianao dia manana safidy roa. Azonao atao ny manaraka ny lalan'ny renirano, izay misy ny fahazoana misedra fahasahiranana kely toy ny fiampitana ny ony mihoatra ny vato tohatra, na ny fanohizana ny lalan'ny ala, ny fitsangatsanganana izay azo atao na dia amin'ny kapa sy kiraro amin'ny zazakely aza.
Ianao koa dia manana Làlana lavitra kokoa mamakivaky ny Canyon manontolo. Tsy misy na iza na iza manolotra fahasahiranana lehibe mihoatra ny filana mandresy fiakarana mihanika na miampita ny reniranon'i Chico, izay maina matetika nefa mety ho sakana amin'ny fotoanan'ny orana. Toy ny amin'ny alokaloky ny angovo voajanahary, ny fizahana voalohany ny fepetra miaraka amin'ny ivon-toerana fampahalalana momba ny fizahan-tany no lakile hialana amin'ny tsy ampoizina.
Valan-javaboary voajanahary amin'ny faritra volkanika ao La Garrotxa
Voaforona mihoatra ny kônta volkano efa-polo sy volkano lava be, ity valan-javaboary ity dia manana sanda voajanahary lehibe. Any amin'ny faritra Garrotxa no misy azy, ao Girona, ny tantaram-peony, ny tany sy ny toetrany dia manome zavamaniry isan-karazany, matetika mampientanentana, miaraka amin'ny ala ôka, ôka ary ala beech manana lanja miavaka miavaka.
Izy io dia iray amin'ireo fonosana voajanahary lehibe indrindra amin'ireo rehetra arosontsika anio. Izany dia Làlana fitsangantsanganana an-tongotra 25 amin'ny halavany sy fahasahiranana samihafa izay mamakivaky ireo toerana mahaliana indrindra ao amin'ny Valan-javaboahary. Ao anatin'ny valan-javaboary dia azonao atao ihany koa ny mitsidika ny hermitage ao anatin'ny volkano Santa Margarita, ny tranom-bakoka volkano Coscat na ny tanàna taloha any Sant Pau. Mila faran'ny herinandro ianao mba hankasitrahana azy rehetra.
Làlan'ny hazo oliva zato taonan'ny Martos
Ny ala oliva Martos dia any Jaén, ao amin'ilay tanàna misy an'io anarana io ihany, izay ialofan'ny Rock-ny, manome azy ireo microclimate tsara sy tany tena mahavokatra. Ny velarantany maherin'ny 20.000 hektare amin'ny tanànany dia resin'ny monokorona ny ala oliva ary indrindra ny hatsaran-tarehy mahafinaritra hazo oliva manan-jato majestic.
Ny lalan'ny hazo oliva zato zato dia manodidina ny 84 hektara, miaraka amin'ny hazo 5.394 amin'ny ankapobeny, ny sasany amin'izy ireo dia sary sokitra velona. Maherin'ny 60% amin'ireo no antitra noho ny 200 taona, na dia nampiseho aza ny lovantsofina am-bava fa ny hazo oliva an'ny Toerana misy ny Llano de Motril zato taona mahery izy ireo.
Ny enclave dia iray kilometatra monja miala ny afovoan-tananan'i Marte, eo akaikin'ny lalana mampitohy an'i Martos amin'i Santiago de Calatrava (J-213). Amin'ny kilometatra 1,3 dia ahitanao ny famantarana voalohany momba ny Centennial Olive Trees ary, raha vao mandalo tranobe fambolena ianao dia hahita ny famantarana faharoa.
Eo amin'ny sisin-tany manasaraka an'i Burgos sy ny Basque Country no riandrano avo indrindra any amin'ny saikinosy: ny riandranon'i Nervión. Ity riandrano lehibe misy haavon'ny 270 metatra any amin'ny faritra voaaro an'i Monte de Santiago ity dia mahasarika zava-boahary izay tsy afaka ankafizintsika mandrakariva.
Ny hatsaran'ny Salto del Nervión dia mitoetra ao anaty rano saingy mandritra ny roa volana isan-taona dia afaka mandinika azy toy izany isika. Rehefa mamakivaky tany karst dia tsy manana rano foana izy io satria mandona sy mikoriana any amin'ny faritra ambany amin'ny lohasahan'ny Delica. Noho izany dia atolotra mitsidika azy rehefa avy ny oram-be, tafio-drivotra mahery vaika na mangotraka.
Misy fomba telo hankafizana ny riandranon'i Nervión. Avy amin'i Burgos no ahafahanao miditra amin'ny ankamaroany tsotra sy tsara atao amin'ny ankizy. Ao amin'ny 2 km an-tongotra fotsiny dia hahatratra ny fomba fijery mahavariana ianao izay hahitana ity riandrano mahatalanjona ity mirohondrohona. Làlana iray hafa hijerena ny riandranon'i Nervión avy eo an-tampony dia ilay manomboka amin'ny tanànan'ny Untzaga any amin'ny faritanin'i Alava. Raha ny fanatanjahan-tena bebe kokoa no tadiavinao ary diniho ny riandranon'i Nervión sy ilay lohasaha Delika mahatalanjona amin'ny fomba fijery hafa, io no làlana mety indrindra.
Ao amin'ny lohasaha avaratr'i Cáceres, ao amin'ny faritra manodidina an'i Hervás, dia tanterahina isaky ny fararano eo anelanelan'ny volana Oktobra sy Desambra Magical Autumn, hetsika iray izay manintona kokoa ny fahafinaretana mankafy ny natiora sy ny firavaka any ambanivohitra. Noho izany dia iray amin'ireo tambajotra voajanahary nisafidianantsika ny hitsidika ny volana Novambra.
Fararano mahagaga Manolotra anao hiaina fararano amin'ny làlan'ny bisikileta, fitsangantsangana, hetsika rano ary hazakazaka an-tendrombohitra, hamelombelona ny sainao amin'ny fampisehoana mozika ary hamerenana ny tsiro nentim-paharazana amin'ny santionan'ny gastronomic. Vetivety dia ho afaka hijery ireo hetsika rehetra ao amin'ny tranokala Ambroz Valley ianao.
Tsy te handeha hitsangantsangana ve ianao na hanomana fitsangatsanganana any ambanivohitra amin'ny iray amin'ireo firaketana voajanahary ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Ocio » Enclaves voajanahary 6 hitsidika amin'ny volana Novambra
Fanalahidy hanararaotana ny fotoana malalaka bebe kokoa amin'ny maha mpivady